Archive du 20200107
Minisitry ny serasera “Mila averina ny fanajana ny fitsipi-pifehezana”
Nandritra ny fananganan-tsaina voalohany tamin'ity taona 2020 ity teny Anosy, omaly maraina no niarahaba sy nirary soa ny fianakaviam-ben'ny Minisiteran'ny Serasera sy ny Kolontsaina Ramatoa Minisitra Lalatiana
Ny any Iran sy Etazonia samy miandry ny hoe iza no hanafika aloha. Ireo mpanararaotra amin’ny lafiny rehetra eto amintsika koa samy miandry izay fotoana hahafahan’izy ireo mampandeha ny
Sosialy sy toekaren’i Madagasikara Mbola tsy mandeha amin’izay laoniny
Tapitra ihany ny taona 2019 ary efa manitsaka ny taona vaovao 2020 ny Malagasy. Feno herintaona ihany koa ny niasan’ny fitondrana ankehitriny.
Gidragidran’i Etazonia sy Iran Miha-mahazo aina i Sina
Miha manankarena hatrany i Sina ary niakatra hatrany ny harinkarena faobeny (PIB). Efa nahatratra 14 217 miliara dolara ny PIB an’i Sina tamin’ny efa-bolana voalohan’ny taona 2019 raha 13 407 miliara dolara izany ny taona 2018.
Firenena Amerikanina Nandefa miaramila maherin’ny 3000 isa any Moyen Orient
Samy miomankomana amin’ny fifanafihana izany amin’izao fotoana izao ny ao Etazonia sy Iran ao taorian’ilay daroka baomban’ny Amerikanina tao amin’ny seranam-piaramanidin’I Bagdad ka nahafaty ny jeneraly Qassem Soleimani izay mpitarika ny revolisionina iranianina ny zoma teo.
Befandriana - Mandritsara Tapaka indray ny lalana
\_Faran’izay sahirana ny any amin’iny faritr’i Sofia iny amin’ny resaka fifamoivoizana ankehitriny satria saika tapaka daholo ny lalana ary maledaka ny tany,
Faritr’i Sofia Tsy misy Merkiora izany
Toy ny faritra rehetra eto Madagasikara dia fotoana mampandeha ny fambolena sy fiompiana koa ao amin’ny faritr’i Sofia amin’izao fotoanan’ny orana izao.
Raharaha Andavamamba Saika hodorana teny Alakamisy Fenoarivo ilay fatin-dehilahy
Olona efatra, telolahy sy vehivavy no natolotra ny Fitsarana omaly taorian’ilay vono olona feno habibiana nitranga tamin’ny 01 Janoary lasa teny Andavamamba tamin’ny 07 ora maraina.
Mpiasa torana teny Anosizato Orinasa telo no hanaovana fanadihadiana
Orinasa telo no hanaovana fanadihadiana lalina ary tsy maintsy handraisana fepetra raha ny vaovao azo mikasika ireo olona 70 isa torana vokatry ny fofona fanafody
JIRAMA Nitohy omaly ny famerenana ny jiro tapaka
Faritra maro hatramin’ny omaly no mbola niaina tao anatin’ny fahatapahan-jiro lavareny na ilay antsoina hoe : delestazy. Anisan’izany ny teny Ambohimangakely…
Fikarakarana taratasy Lolohavina hatrany ny vahiny
Velon-taraina tanteraka ny mponina manamorona iny lalana Boulevard de l’Europe mitohy hatrany amin’ny rocade iny amin’izao fotoana izao. Misy Malagasy mba mividy tany kely
Trafikana fitaovam-piadiana Basy mahery vaika tratra teny Anosibe sy Ampitatafika
Nahazo loharanom-baovao ny zandarimariam-pirenena fa misy olom-pirenena tsy nahazo alalana hitazona basy kanefa mivarotra izany teny amin’ny faritra Fenoarivo Atsimondrano.
Adin’ny mpivady Sahy nandatsa-drà ny vehivavy tato ato
Ankoatra ilay faty nentina fiara-karetsaka ny alakamisy teo, naratran’ny antsy nataon’ny vadiny indray ny raim-pianakaviana teny Ivandry.